Myanmar farm workers
ပီ။ ဒီတပတ်တော့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ရေကို တောင်သူတိုင်း လက်လှမ်းမှီဖို့ ကိုဗစ်၁၉ ကာလ အတွင်း လုပ်နိုင်တာတွေကို စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းဝင်းကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
ဒီတပတ်တော့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ရေကို တောင်သူတိုင်း လက်လှမ်းမှီဖို့ ကိုဗစ်၁၉ ကာလ အတွင်း လုပ်နိုင်တာတွေကို စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းဝင်းကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
ဒေါက်တာထွန်းဝင်း။. ။“၂၀၀၈ နာဂစ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ရာသီဥတုက ဖေါက်ပြန်နေတယ်။ ဒီကနေ့ အထိမှန်နေတာက မိုးတွင်းမှာ၅ လလုံးသေချာတာက ရေဖုံးမယ်၊ ရေမဖုံးရင် မိုးခေါင်ရင် ရေငတ်မယ်။ မိုးကို စာချုပ်နဲ့ လုပ်တာ မဟုတ်တော့ သူပေးမှ ရမှာ ဆိုတော့ များသောအားဖြင့် ဖြစ်နေတာက ရေများရင် စိုက်ခင်း သီးနှံပင်တွေ ရေဖုံးတယ်. မိုးမလာ တော့ဘူး ဆိုရင် ခေါင်တယ်။ အခုဆိုရင်ပဲ မုတ်သုန်လေက မစို့မပို့ လုပ်သွားပြီးတော့ ဇွန်လ နှောင်းပိုင်းမှ တခါ ပြန်ပြီးတော့ မိုးရွာမှာ ဆိုတော့၊ သီးနှံ စိုက်ချိန်တွေက နောက်ကျသွားပြန်ရော၊ ဒီလိုနောက်ကျ သွားရင် နောက်မှ စိုက်မယ့် ဆောင်းသီးနှံမှာ သွားထိခိုက် ပြန်ရော။
ဆိုတော့ ဒီလို မသေချာ မရေရာ မိုးကို မှီပြီးတော့ စိုက်နေတာက ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ၈၀ % ရှိတယ်။”
မေး။.။“ မြန်မာ့ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍမှာ ရေ အပြင် လိုအပ်တာတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။”
ဒေါက်တာထွန်းဝင်း။. ။“လက်ရှိ အနေအထားမှာ လယ်သမားတွေ အားလုံးက ကျွဲနွား၊ ထွန်တုံး ထွန်တံတွေနဲ့ သွားနေရတဲ့ အနေအထားမှာပဲ ရှိသေးတယ်။ နောက် သူလိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ ရေမရဘူး။ ရေမရတဲ့ အတွက် မြေယာတွေ ထွန်ယက်တဲ့ နေရာမှာ သူတို့က အားလုံးက အဆင်မပြေဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှာ လုပ်သားက မရှိသလောက်ပဲ ရှားတယ်။ နောက် ပြင်ပ ဈေးကွက် မရှိတဲ့ အတွက် လယ်သမားက ရရာပဲ လုပ်တယ်။ ဖြစ်သလိုပဲ လုပ်တယ်။ ရာသီကလည်း စောစောက ပြောသလို နာဂစ်နောက်ပိုင်းမှာ ရာသီက ပြင်းထန်လာတယ်။ အထူးသဖြင့် အပူချိန် ပေါ့နော်။ အပူချိန်က ၉ နာရီ ၁၀ နာရီဆို ဘယ်သူမှ ကွင်းထဲမှာ မနေနိုင်တော့ဘူး။
ဆိုတော့ လယ်ယာ ရဲ့ အနေထားက လုပ်သားရှားပါးတယ်။ ရာသီဥတုက ပြင်းထန်တယ်။ နောက်ပြီး ဈေးကွက် မရှိတဲ့ အတွက် လယ်သမားက စိတ်မဝင်စားပဲ ဖြစ်လာနေတဲ့ လယ်ယာလုပ်ငန်းကြီးကို အစိုးရက ဒီအတိုင်း မျက်ကွယ်ပြုနေမယ် ဆိုရင် တော့ တိုင်းပြည်သည် ရေရှည်မှာ ကိုဗစ်ကလည်း နှောက်ယှက်မယ် ဆိုရင် အနေထားက တော်တော်ကို ဆိုးဝါးမယ်။
ဒီအနေထားကနေ ရုန်းထွက် နိုင်ဖို့ ဆိုရင် ဒီအားလုံးကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းသည် နံပတ် ၁ ရေ အရင်းအမြစ်တွေကို ဖေါ်ထုတ်ပြီးတော့ ရေအစီအမံတွေကို စိုက်နိုင်တဲ့ လယ်သမားတွေ စိုက်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်အောင် စီမံပေးရမယ်။ နံပတ် ၂ ခုနက လက်ထွန်ပဲဖြစ်နေတဲ့ အင်အားမဲ့နေတဲ့ လယ်သမားကို အင်အားရှိတဲ့ လယ်သမားဖြစ်အောင် စက်မှုကရိယာ၊ လယ်လုပ်ကရိယာတွေ တပ်ဆင်ပေးရမယ်။ ဒါသည် မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အဓိက လုပ်ငန်း လို့ကျနော် မြင်တယ်။”
မေး။. ။“ဟုတ်ကဲ့။ ဆိုတော့ ပထမဦးဆုံးက ရေ အရင်းအမြစ်တွေ ဖေါ်ထုတ်ပေးရမယ်။ ဒုတိယက စက်တွေ တပ်ဆင်ပေးရမယ်ပေါ့။
ဆိုတော့ ပထမဆုံး ရေအရင်းအမြစ်တွေ ဖေါ်ထုတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် အနေအထားကလည်း ထူးခြားပါတယ်။ တောင်တန်းတွေရော၊ မြေပြန့်တွေရော ပင်လယ်နဲ့ မြစ်ချောင်းတွေ၊ ရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကလည်း တနေရာနဲ့ တနေရာ မတူပါဘူး။ ဆိုတော့ ရေအရင်းအမြစ်အတွက် ဘယ်ဒေသမှာ ဘယ်လို လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာထွန်းဝင်း။. ။“ ပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်လောက် ရေအရင်းအမြစ် ပေါတာ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် အသုံးမချဘူး။ အသုံးမချဘူးဆိုတာက ဘာလဲ ဆိုတော့ နံပတ် ၁ အခု မေလ ကနေ စရွာမယ့် အောက်တိုဘာ အထိ ရွာမယ့် မိုးသည် အလွန်ကို -ရွာတဲ့ အခါမှာ သဲကြီးမဲကြီး ရွာတယ်။ ရွာသမျှ အားလုံး ချောင်းတွေ မြောင်းတွေထဲ မြစ်ထဲ စီးပြီးတော့ ဧရာဝတီကနေ မျော သွားတာပဲ။ ဒီရေတွေ အားလုံးကို ရေမရှိတဲ့ အခါ သုံးဖို့ ဘယ်လို လှောင်မလဲဆိုတဲ့ အစီအမံ။
ဆိုတော့ ရေလှောင်တမံတွေ ရှိရဲ့သားနဲ့ ဒါကို ဘာလို့ ပြောသလဲ။ ရေလှောင်တမံ တွေရဲ့ ဒီကနေ့ အနေထားက ရေလှောင်တမံတွေသည် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက်က ဆောက်တာ ဆိုတော့ ကောကုန်ပြီ။ ရေလှောင်တမံတွေရဲ့ ရေအရင်းအမြစ် ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ သစ်တောတွေသည် ပြုန်းကုန်ပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ ယနေ့ ရေလှောင်တမံတွေသည် အခု နွေရာသီ စိုက်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ရေမရှိတော့ဘူး။
ဥပမာ သဖန်းဆိပ် ဆည်ကြီးဆိုရင် ဧက ၅ သိန်းကို ရေပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျခံ ဆောက်ထားတဲ့ မြန်မာပြည်က အကြီးဆုံး ဆည်ကြီး ဖြစ်တယ်။ ဒီကနေ့ ဆိုရင် ဧက ၅ သိန်းက တသိန်းတောင် မှ စပါး မစိုက်နိုင် တော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆည်ကြီး ကောသွားပြီးတော့ ရေမလှောင်နိုင်လို့။ ကောတာလည်း ပါတယ်။ ရေအရင်းအမြစ်တွေ ခန်းခြောက် ကုန်လို့ ရေမဆင်းတာလည်း ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တမိုးတွင်းလုံး လှောင်ထား သော်လည်း စိုက်ရမယ့် အချိန် ကျတော့ ရေမရှိတော့ဘူး။ ဆိုတော့ ဒီအနေထား တွေသည် ဆည်တွေ အပေါ်မှာလည်း သူတို့ ပြန်ပြီးတော့ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းဖို့ ကောင်းတယ်။ ဆည်တွေကို ပိုပြီးတော့ လှောင်နိုင်အား ကောင်းအောင် တူးဖို့ လိုတယ်။ ဆည်ကို ရေလာစေတဲ့ တောတောင်တွေ ပြန်ပြီတော့ ပြုပြင်ဖို လိုတယ်။ ”
မေး။.။“ ဒီလို တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဆည်ရေထက် ကောင်းတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအတော်များများမှာ ရှိနေတယ် လို့လည်း ပြောပါတယ်။”
ဒေါက်တာထွန်းဝင်း။. ။“ရခိုင်ကမ်းမြောင် ဒေသတလျှောက် ဆင်းလာတဲ့ တောင်တန်းတွေ၊ ပဲခူးရိုးမရဲ့ အရှေ့အနောက် သွယ်တန်း ဆင်းနေတဲ့ တောင်တန်းတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ရှမ်းရိုးမ တောင်တန်းတလျှောက်မှာ ဟိုပုန်းချိုင့်ဝှမ်း၊ ဟဲဟိုးချိုင့်ဝှမ်း တောင်တန်းတွေ သွယ်မြောင် ဆင်းသွားတယ်။ နောက် ကယားပြည်နယ်သွားရင် ကယား တောင်တန်းတွေ၊ တနင်္သာရီ တောင်တန်းတွေ၊ ကရင်တောင်တန်းတွေ သွယ်ပြီး ဆင်းသွားတယ်။ အဲဒီနေရာတွေမှာ လယ်သမားလေးတွေက တချို့ ဘာလုပ်သလဲ ဆိုရင် တောင်တန်းတွေ ကနေမှ ဆင်းလာတဲ့ ချောင်းလေးတွေ ကနေ ချောင်းပိတ် မြောင်းပိတ် ဆည်ကလေးတွေ လုပ်ကြတယ်။
သူတို့က အင်အားက ရှိတာက ဘာရှိလည်း၊ သူတို့မှာ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲ တွေ သစ်တုံး သစ်ခက် ကလေးတွေ၊ ဒါလေးတွေနဲ့ တားပြီး ရေတားဆည်လေးတွေ လုပ်ကြတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီ လယ်သမားလေးတွေသာ ဆည်ကြီးတည်ဆောက်တာထက် ဘိလပ်မြေလေး အုတ်သဲလေး ပေး ရေတားဆည် ကလေးတွေများ တဦးချင်း ကို နိုင်ငံတော်ကနေ ထောက်ပံ့ ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ လယ်သမားပိုင်၊ ကိုယ်ပိုင် ဆည် လေးတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ ရေရှည်ခံမယ်၊ ရေရှည် သူ့ဟာသူ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမယ်။ ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည် တနံတလျားမှာ ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းသည် လက်ညှိုးထိုးလို့ မလွဲနိုင်ပါဘူး ခင်ဗျ။ အများကြီးပဲ။”
မေး။.။“ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ဒေသတွေမှာ မြေအောက်ရေ သုံးနိုင်အောင် စီမံ ပေးဖို့ လိုပါတယ်။”
ဒေါက်တာထွန်းဝင်း။.။“Dry zone - ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရေခန်းတယ်။ သို့သော် မြေအောက်ရေ ရှိတယ်။ မြေအောက်ရေမှာ - ဆားဓါတ်မပါတဲ့ ရေပေါ့- ဒါ ရေတော့ တိုင်းတာဖို့ လိုတယ်။ ဆားဓါတ်မပါတဲ့ မြေအောက်ရေက အများကြီး ရှိတယ်။ အဲဒါကို ရေသန့်တွင်းတွေ၊ ၄ လက်မ တွင်းလေးတွေ၊ ပေ ၇၀ - ၈၀။ လေးငါးဆယ် ဆို ရောက်ပါတယ်။ pump လေးတွေ ရေတိုင်လေးတွေ ထူမယ် ဆိုရင် ဒီလို ရေတိုင် တတိုင် ထူ လို့ရှိရင် ဧက ၈ ဧက။၁၀ ဧကလောက် သွားပါတယ်။ ၄ လက်မတွင်း။ ရေမရတဲ့ နေရာမှာ။”
မေး။.။“ ရေအရင်းအမြစ် စီမံရေး အတွက် တကယ်တမ်းလုပ်ရမယ့် နေရာကတော့ ဧရာဝတီမြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသပါ။”
ဒေါက်တာထွန်းဝင်း။. ။“တကယ်လုပ်စရာ ကောင်းတဲ့ နေရာသည် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသ။ အဲဒီနေရာသည် မိုးတွင်းမှာ ဧက ၄ သိန်းလောက် စိုက်တယ်။ နွေမှာက ဘာမှကို မတွေ့ရဘူး။ ကျိုက်လတ် မြို့နယ် တမြို့နယ် လောက်ပဲ ရေလေး သဘာဝ ဝင်တဲ့ မြို့နယ် လောက်ပဲ နွေစပါး စိုက်တယ်။
ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ဒီမြစ်ရေဟာ ပင်လယ်ဆွဲအားနဲ့ သွားနေတော့ တနေ့ကို ၂ ကြိမ်တက်တယ်။ ၈ နာရီခြား၊ တနေ့ကို ၂ ကြိမ်တက်တယ်။ ၂ ကြိမ်ကျတယ်။ ဒီရေ အတက်အကျနဲ့ သွားနေတာ။ အဲဒီမှာ ရေချိုလွှမ်းတာက ဧရာဝတီက ဧက ၄ သန်းလောက်မှာ ၂ သန်းလောက်က ရေချိုလွှမ်းတယ်။ ၂ သန်းလောက်က ပင်လယ်ပိုင်း။ ဒီ ၂ သန်းကို စိုက်ခြင်းအားဖြင့် စပါးက တဧကသည် တတန်ခွဲ ဆန်တတန်ခွဲထွက်တယ်။ ဆိုတော့စပါး ဒီ ဧက ၂ သန်း စိုက်ရင် ဆန်တန်ချိန် ၃ သန်းက အေးအေးဆေးဆေး ဧရာဝတီ တိုင်းကို အခြေခံပြီး တော့ နွေရာသီမှာ ရေပေးစံနစ်နဲ့ စိုက်နိုင်တယ်။
ရေပေးစံနစ်ဆိုတာ ဘာမှ မခက်ဘူး။ ကျနော်တို့ ရေထဲမှာ ဖေါင်လေးတွေနဲ့ pump ရေပန့်လေးတွေထိုင်ပြီးတော့ လယ်ထဲကို ရေသွင်းပေး ပြီးတော့၊ ချောင်းပိတ် မြောင်းပိတ်တွေ လုပ်ပြီးတော့မှ ဒီစံနစ်တွေများ ဧရာဝတီ တိုင်းမှာ လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ဧရာဝတီတိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြေဆီ အထက်သန်ဆုံး နေရာ။ နွေအခါမှာ နေရောင် အပြည့်ရတယ်။ ချောင်းတွေ မြောင်းတွေကနေ ဒီရေ အတက်အကျမှာ လယ်နှုတ်ခမ်းကို လာတင်နေတဲ့ ရေလေးကိုပဲ အခုခေတ်ဆို အိတ်ဇယ် flow ဆိုတဲ့ ပိုက်ကြီးတွေနဲ့များ သွင်းပြီးတော့ လုပ်လိုက်မယ် ဆိုလို့ ရှိရင်တော့ တော်တော်ကို အလားအလာ ကောင်းတယ်။ အခြေနေလည်း ကောင်းပါတယ်။ ရေပဲ လိုတယ်။ ဘာမှမလိုဘူး လယ်သမားမှာ။
ဆိုတော့ ဒီရေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေအစီအမံပဲ လိုတယ်။”
မေး။.။“ မြစ်ကြောင်း မတိမ်ကောအောင် စောင့်ရှောက်ရေးကိုလည်း အလေးထားရမှာပါ။”
ဒေါက်တာထွန်းဝင်း။.။“ကျနော်တို့မှာ အခုဆို မြစ်တွေ ချောင်းတွေ အိုင်တွေ၊ အင်းတွေ ကောတယ်ပေါ့။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ သစ်တောတွေ ပြုန်းတဲ့ အတွက် အားလုံးက တိုက်စား ပြီးတော့ ကောတယ်။ ဧရာဝတီမြစ် သည် မြစ်ဖျားကနေ ရွှေမိုင်းတွေ၊ ကျောက်မိုင်းတွေ တူးတဲ့ တွင်းစာ တွေက အဲဒီကနေ မျောပါပြီးတော့ဘယ်အထိ ပိတ်သွားလဲ ဆိုတော့ ပခုက္ကူအထိ. ပိတ်သွားတယ်။ ပခုက္ကူ အထိဆို ၃ မိုင်လောက်ရှည်တယ်။. တော်တော်ကြီးတဲ့ မြစ်ကြီးပဲ ဒါပေမယ့် အားလုံးက နုံးတွေ ချည်းပဲ ဘယ်လောက် အထိ ရောက်သလဲ ဆိုတော့ မကွေးအထိ ရောက်တယ်။
ကျနော်တို့က သဘာဝ ရေအရင်းအမြစ် ပြုန်းတီးသွားတယ်။ တကယ်လို့ ဒါတွေများ တူးဖေါ်ပြီးတော့များ လုပ်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဧရာဝတီ မြစ်ကြီးသည် ကျနော်တို့ သောက်သုံးရေ၊ စိုက်ပျိုးရေ၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကုန်တွေ အထက် ဗန်းမော်အထိ တင်လုိ့ရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့ရေး အထိများ စဉ်းစားမယ် ဆိုရင်တော့ အားလုံးက တချက်ခုတ် အများကြီး ပြတ်ပါတယ်။”
စိုက်ပျိုးရေး ပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းဝင်းရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ပဲ ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပွံနဲ့နည်းပညာ ကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
ပီ။ ဒီတပတျတော့ စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍ အတှကျ မရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့ ရကေို တောငျသူတိုငျး လကျလှမျးမှီဖို့ ကိုဗဈ၁၉ ကာလ အတှငျး လုပျနိုငျတာတှကေို စိုကျပြိုးရေးပညာရှငျ ဒေါကျတာထှနျးဝငျးကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးမှာပါ။
ဒေါကျတာထှနျးဝငျး။. ။“၂၀၀၈ နာဂဈပွီးတဲ့ နောကျပိုငျးမှာ ရာသီဥတုက ဖေါကျပွနျနတေယျ။ ဒီကနေ့ အထိမှနျနတောက မိုးတှငျးမှာ ၅ လလုံးသခြောတာက ရဖေုံးမယျ၊ ရမေဖုံးရငျ မိုးခေါငျရငျ ရငေတျမယျ။ မိုးကို စာခြုပျနဲ့ လုပျတာ မဟုတျတော့ သူပေးမှ ရမှာ ဆိုတော့ မြားသောအားဖွငျ့ ဖွဈနတောက ရမြေားရငျ စိုကျခငျး သီးနှံပငျတှေ ရဖေုံးတယျ. မိုးမလာ တော့ဘူး ဆိုရငျ ခေါငျတယျ။ အခုဆိုရငျပဲ မုတျသုနျလကေ မစို့မပို့ လုပျသှားပွီးတော့ ဇှနျလ နှောငျးပိုငျးမှ တခါ ပွနျပွီးတော့ မိုးရှာမှာ ဆိုတော့၊ သီးနှံ စိုကျခြိနျတှကေ နောကျကသြှားပွနျရော၊ ဒီလိုနောကျကြ သှားရငျ နောကျမှ စိုကျမယျ့ ဆောငျးသီးနှံမှာ သှားထိခိုကျ ပွနျရော။
ဆိုတော့ ဒီလို မသခြော မရရော မိုးကို မှီပွီးတော့ စိုကျနတောက ကနြျောတို့ နိုငျငံရဲ့ ၈၀ % ရှိတယျ။”
မေး။. ။“ မွနျမာ့ စိုကျပြိုးရေး ကဏ်ဍမှာ ရေ အပွငျ လိုအပျတာတှေ အမြားကွီး ရှိနပေါသေးတယျ။”
ဒေါကျတာထှနျးဝငျး။. ။“လကျရှိ အနအေထားမှာ လယျသမားတှေ အားလုံးက ကြှဲနှား၊ ထှနျတုံး ထှနျတံတှနေဲ့ သှားနရေတဲ့ အနအေထားမှာပဲ ရှိသေးတယျ။ နောကျ သူလိုခငျြတဲ့ အခြိနျမှာ ရမေရဘူး။ ရမေရတဲ့ အတှကျ မွယောတှေ ထှနျယကျတဲ့ နရောမှာ သူတို့က အားလုံးက အဆငျမပွဘေူး။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ လယျယာလုပျငနျးမှာ လုပျသားက မရှိသလောကျပဲ ရှားတယျ။ နောကျ ပွငျပ ဈေးကှကျ မရှိတဲ့ အတှကျ လယျသမားက ရရာပဲ လုပျတယျ။ ဖွဈသလိုပဲ လုပျတယျ။ ရာသီကလညျး စောစောက ပွောသလို နာဂဈနောကျပိုငျးမှာ ရာသီက ပွငျးထနျလာတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အပူခြိနျ ပေါ့နျော။ အပူခြိနျက ၉ နာရီ ၁၀ နာရီဆို ဘယျသူမှ ကှငျးထဲမှာ မနနေိုငျတော့ဘူး။
ဆိုတော့ လယျယာ ရဲ့ အနထေားက လုပျသားရှားပါးတယျ။ ရာသီဥတုက ပွငျးထနျတယျ။ နောကျပွီး ဈေးကှကျ မရှိတဲ့ အတှကျ လယျသမားက စိတျမဝငျစားပဲ ဖွဈလာနတေဲ့ လယျယာလုပျငနျးကွီးကို အစိုးရက ဒီအတိုငျး မကျြကှယျပွုနမေယျ ဆိုရငျ တော့ တိုငျးပွညျသညျ ရရှေညျမှာ ကိုဗဈကလညျး နှောကျယှကျမယျ ဆိုရငျ အနထေားက တျောတျောကို ဆိုးဝါးမယျ။
ဒီအနထေားကနေ ရုနျးထှကျ နိုငျဖို့ ဆိုရငျ ဒီအားလုံးကို ဖွရှေငျးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးသညျ နံပတျ ၁ ရေ အရငျးအမွဈတှကေို ဖျေါထုတျပွီးတော့ ရအေစီအမံတှကေို စိုကျနိုငျတဲ့ လယျသမားတှေ စိုကျဖို့ အဆငျသငျ့ ဖွဈအောငျ စီမံပေးရမယျ။ နံပတျ ၂ ခုနက လကျထှနျပဲ ဖွဈနတေဲ့ အငျအားမဲ့နတေဲ့ လယျသမားကို အငျအားရှိတဲ့ လယျသမားဖွဈအောငျ စကျမှုကရိယာ၊ လယျလုပျကရိယာတှေ တပျဆငျပေးရမယျ။ ဒါသညျ မဖွဈမနေ လုပျရမယျ့ နိုငျငံတျောရဲ့ အဓိက လုပျငနျး လို့ကနြျော မွငျတယျ။”
မေး။. ။“ဟုတျကဲ့။ ဆိုတော့ ပထမဦးဆုံးက ရေ အရငျးအမွဈတှေ ဖျေါထုတျပေးရမယျ။ ဒုတိယက စကျတှေ တပျဆငျပေးရမယျပေါ့။
ဆိုတော့ ပထမဆုံး ရအေရငျးအမွဈတှေ ဖျေါထုတျတာနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ မွနျမာပွညျမှာဆိုရငျ အနအေထားကလညျး ထူးခွားပါတယျ။ တောငျတနျးတှရေော၊ မွပွေနျ့တှရေော ပငျလယျနဲ့ မွဈခြောငျးတှေ၊ ရှိတယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ စိုကျပြိုးရေးကလညျး တနရောနဲ့ တနရော မတူပါဘူး။ ဆိုတော့ ရအေရငျးအမွဈအတှကျ ဘယျဒသေမှာ ဘယျလို လုပျနိုငျတယျဆိုတာ ပွောပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာထှနျးဝငျး။. ။“ ပွောရမယျဆိုရငျ မွနျမာပွညျလောကျ ရအေရငျးအမွဈ ပေါတာ မရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့ အသုံးမခဘြူး။ အသုံးမခဘြူးဆိုတာက ဘာလဲ ဆိုတော့ နံပတျ ၁ အခု မလေ ကနေ စရှာမယျ့ အောကျတိုဘာ အထိ ရှာမယျ့ မိုးသညျ အလှနျကို - ရှာတဲ့ အခါမှာ သဲကွီးမဲကွီး ရှာတယျ။ ရှာသမြှ အားလုံး ခြောငျးတှေ မွောငျးတှထေဲ မွဈထဲ စီးပွီးတော့ ဧရာဝတီကနေ မြော သှားတာပဲ။ ဒီရတှေေ အားလုံးကို ရမေရှိတဲ့ အခါ သုံးဖို့ ဘယျလို လှောငျမလဲဆိုတဲ့ အစီအမံ။
ဆိုတော့ ရလှေောငျတမံတှေ ရှိရဲ့သားနဲ့ ဒါကို ဘာလို့ ပွောသလဲ။ ရလှေောငျတမံ တှရေဲ့ ဒီကနေ့ အနထေားက ရလှေောငျတမံတှသေညျ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၃၀ လောကျက ဆောကျတာ ဆိုတော့ ကောကုနျပွီ။ ရလှေောငျတမံတှရေဲ့ ရအေရငျးအမွဈ ရအောငျ လုပျထားတဲ့ သဈတောတှသေညျ ပွုနျးကုနျပွီ။ ဒါကွောငျ့မို့ ယနေ့ ရလှေောငျတမံတှသေညျ အခု နှရောသီ စိုကျမယျ ဆိုလို့ရှိရငျ ရမေရှိတော့ဘူး။
ဥပမာ သဖနျးဆိပျ ဆညျကွီးဆိုရငျ ဧက ၅ သိနျးကို ရပေေးဖို့ ရညျရှယျပွီး ငှကေုနျကွေးကခြံ ဆောကျထားတဲ့ မွနျမာပွညျက အကွီးဆုံး ဆညျကွီး ဖွဈတယျ။ ဒီကနေ့ ဆိုရငျ ဧက ၅ သိနျးက တသိနျးတောငျ မှ စပါး မစိုကျနိုငျ တော့ဘူး။ ဘာဖွဈလို့လညျး ဆညျကွီး ကောသှားပွီးတော့ ရမေလှောငျနိုငျလို့။ ကောတာလညျး ပါတယျ။ ရအေရငျးအမွဈတှေ ခနျးခွောကျ ကုနျလို့ ရမေဆငျးတာလညျး ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ တမိုးတှငျးလုံး လှောငျထား သျောလညျး စိုကျရမယျ့ အခြိနျ ကတြော့ ရမေရှိတော့ဘူး။ ဆိုတော့ ဒီအနထေား တှသေညျ ဆညျတှေ အပျေါမှာလညျး သူတို့ ပွနျပွီးတော့ ပွုပွငျ ထိနျးသိမျးဖို့ ကောငျးတယျ။ ဆညျတှကေို ပိုပွီးတော့ လှောငျနိုငျအား ကောငျးအောငျ တူးဖို့ လိုတယျ။ ဆညျကို ရလောစတေဲ့ တောတောငျတှေ ပွနျပွီတော့ ပွုပွငျဖို လိုတယျ။ ”
မေး။. ။“ ဒီလို တညျဆောကျထားတဲ့ ဆညျရထေကျ ကောငျးတဲ့ အရငျးအမွဈတှေ မွနျမာနိုငျငံ ဒသေအတျောမြားမြားမှာ ရှိနတေယျ လို့လညျး ပွောပါတယျ။”
ဒေါကျတာထှနျးဝငျး။. ။“ရခိုငျကမျးမွောငျ ဒသေတလေြှာကျ ဆငျးလာတဲ့ တောငျတနျးတှေ၊ ပဲခူးရိုးမရဲ့ အရှအေ့နောကျ သှယျတနျး ဆငျးနတေဲ့ တောငျတနျးတှေ၊ နောကျပွီးတော့ ကနြျောတို့ ရှမျးရိုးမ တောငျတနျးတလေြှာကျမှာ ဟိုပုနျးခြိုငျ့ဝှမျး၊ ဟဲဟိုးခြိုငျ့ဝှမျး တောငျတနျးတှေ သှယျမွောငျ ဆငျးသှားတယျ။ နောကျ ကယားပွညျနယျသှားရငျ ကယား တောငျတနျးတှေ၊ တနင်ျသာရီ တောငျတနျးတှေ၊ ကရငျတောငျတနျးတှေ သှယျပွီး ဆငျးသှားတယျ။ အဲဒီနရောတှမှော လယျသမားလေးတှကေ တခြို့ ဘာလုပျသလဲ ဆိုရငျ တောငျတနျးတှေ ကနမှေ ဆငျးလာတဲ့ ခြောငျးလေးတှေ ကနေ ခြောငျးပိတျ မွောငျးပိတျ ဆညျကလေးတှေ လုပျကွတယျ။
သူတို့က အငျအားက ရှိတာက ဘာရှိလညျး၊ သူတို့မှာ ကြောကျတုံးကြောကျခဲ တှေ သဈတုံး သဈခကျ ကလေးတှေ၊ ဒါလေးတှနေဲ့ တားပွီး ရတေားဆညျလေးတှေ လုပျကွတယျ။ တကယျလို့ အဲဒီ လယျသမားလေးတှသော ဆညျကွီးတညျဆောကျတာထကျ ဘိလပျမွလေေး အုတျသဲလေး ပေး ရတေားဆညျ ကလေးတှမြေား တဦးခငျြး ကို နိုငျငံတျောကနေ ထောကျပံ့ ပေးမယျ ဆိုရငျတော့ လယျသမားပိုငျ၊ ကိုယျပိုငျ ဆညျ လေးတှေ ဖွဈပွီးတော့ ရရှေညျခံမယျ၊ ရရှေညျ သူ့ဟာသူ ပွုပွငျ ထိနျးသိမျးမယျ။ ဆိုရငျတော့ မွနျမာပွညျ တနံတလြားမှာ ရရေရှိရေး လုပျငနျးသညျ လကျညှိုးထိုးလို့ မလှဲနိုငျပါဘူး ခငျဗြ။ အမြားကွီးပဲ။”
မေး။. ။“ မွနျမာနိုငျငံ အလယျပိုငျး ပူပွငျးခွောကျသှတေဲ့ဒသေတှမှော မွအေောကျရေ သုံးနိုငျအောငျ စီမံ ပေးဖို့ လိုပါတယျ။”
ဒေါကျတာထှနျးဝငျး။. ။“Dry zone - ပူပွငျးခွောကျသှတေဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ ရခေနျးတယျ။ သို့သျော မွအေောကျရေ ရှိတယျ။ မွအေောကျရမှော - ဆားဓါတျမပါတဲ့ ရပေေါ့- ဒါ ရတေော့ တိုငျးတာဖို့ လိုတယျ။ ဆားဓါတျမပါတဲ့ မွအေောကျရကေ အမြားကွီး ရှိတယျ။ အဲဒါကို ရသေနျ့တှငျးတှေ၊ ၄ လကျမ တှငျးလေးတှေ၊ ပေ ၇၀ - ၈၀။ လေးငါးဆယျ ဆို ရောကျပါတယျ။ pump လေးတှေ ရတေိုငျလေးတှေ ထူမယျ ဆိုရငျ ဒီလို ရတေိုငျ တတိုငျ ထူ လို့ရှိရငျ ဧက ၈ ဧက။ ၁၀ ဧကလောကျ သှားပါတယျ။ ၄ လကျမတှငျး။ ရမေရတဲ့ နရောမှာ။”
မေး။. ။“ ရအေရငျးအမွဈ စီမံရေး အတှကျ တကယျတမျးလုပျရမယျ့ နရောကတော့ ဧရာဝတီမွဈဝ ကြှနျးပျေါဒသေပါ။”
ဒေါကျတာထှနျးဝငျး။. ။“တကယျလုပျစရာ ကောငျးတဲ့ နရောသညျ ဧရာဝတီ မွဈဝကြှနျးပျေါ ဒသေ။ အဲဒီနရောသညျ မိုးတှငျးမှာ ဧက ၄ သိနျးလောကျ စိုကျတယျ။ နှမှောက ဘာမှကို မတှရေ့ဘူး။ ကြိုကျလတျ မွို့နယျ တမွို့နယျ လောကျပဲ ရလေေး သဘာဝ ဝငျတဲ့ မွို့နယျ လောကျပဲ နှစေပါး စိုကျတယျ။
ဘာကွောငျ့လညျး ဆိုတော့ ဒီမွဈရဟော ပငျလယျဆှဲအားနဲ့ သှားနတေော့ တနကေို့ ၂ ကွိမျတကျတယျ။ ၈ နာရီခွား၊ တနကေို့ ၂ ကွိမျတကျတယျ။ ၂ ကွိမျကတြယျ။ ဒီရေ အတကျအကနြဲ့ သှားနတော။ အဲဒီမှာ ရခြေိုလှမျးတာက ဧရာဝတီက ဧက ၄ သနျးလောကျမှာ ၂ သနျးလောကျက ရခြေိုလှမျးတယျ။ ၂ သနျးလောကျက ပငျလယျပိုငျး။ ဒီ ၂ သနျးကို စိုကျခွငျးအားဖွငျ့ စပါးက တဧကသညျ တတနျခှဲ ဆနျတတနျခှဲထှကျတယျ။ ဆိုတော့စပါး ဒီ ဧက ၂ သနျး စိုကျရငျ ဆနျတနျခြိနျ ၃ သနျးက အေးအေးဆေးဆေး ဧရာဝတီ တိုငျးကို အခွခေံပွီး တော့ နှရောသီမှာ ရပေေးစံနဈနဲ့ စိုကျနိုငျတယျ။
ရပေေးစံနဈဆိုတာ ဘာမှ မခကျဘူး။ ကနြျောတို့ ရထေဲမှာ ဖေါငျလေးတှနေဲ့ pump ရပေနျ့လေးတှထေိုငျပွီးတော့ လယျထဲကို ရသှေငျးပေး ပွီးတော့၊ ခြောငျးပိတျ မွောငျးပိတျတှေ လုပျပွီးတော့မှ ဒီစံနဈတှမြေား ဧရာဝတီ တိုငျးမှာ လုပျမယျ ဆိုရငျတော့ ဧရာဝတီတိုငျးသညျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ မွဆေီ အထကျသနျဆုံး နရော။ နှအေခါမှာ နရေောငျ အပွညျ့ရတယျ။ ခြောငျးတှေ မွောငျးတှကေနေ ဒီရေ အတကျအကမြှာ လယျနှုတျခမျးကို လာတငျနတေဲ့ ရလေေးကိုပဲ အခုခတျေဆို အိတျဇယျ flow ဆိုတဲ့ ပိုကျကွီးတှနေဲ့မြား သှငျးပွီးတော့ လုပျလိုကျမယျ ဆိုလို့ ရှိရငျတော့ တျောတျောကို အလားအလာ ကောငျးတယျ။ အခွနေလေညျး ကောငျးပါတယျ။ ရပေဲ လိုတယျ။ ဘာမှမလိုဘူး လယျသမားမှာ။
ဆိုတော့ ဒီရနေဲ့ ပတျသကျလို့ ရအေစီအမံပဲ လိုတယျ။”
မေး။. ။“ မွဈကွောငျး မတိမျကောအောငျ စောငျ့ရှောကျရေးကိုလညျး အလေးထားရမှာပါ။”
ဒေါကျတာထှနျးဝငျး။. ။“ကနြျောတို့မှာ အခုဆို မွဈတှေ ခြောငျးတှေ အိုငျတှေ၊ အငျးတှေ ကောတယျပေါ့။ ဘာကွောငျ့လညျး ဆိုတော့ သဈတောတှေ ပွုနျးတဲ့ အတှကျ အားလုံးက တိုကျစား ပွီးတော့ ကောတယျ။ ဧရာဝတီမွဈ သညျ မွဈဖြားကနေ ရှမေိုငျးတှေ၊ ကြောကျမိုငျးတှေ တူးတဲ့ တှငျးစာ တှကေ အဲဒီကနေ မြောပါပွီးတော့ဘယျအထိ ပိတျသှားလဲ ဆိုတော့ ပခုက်ကူအထိ. ပိတျသှားတယျ။ ပခုက်ကူ အထိဆို ၃ မိုငျလောကျရှညျတယျ။. တျောတျောကွီးတဲ့ မွဈကွီးပဲ ဒါပမေယျ့ အားလုံးက နုံးတှေ ခညျြးပဲ ဘယျလောကျ အထိ ရောကျသလဲ ဆိုတော့ မကှေးအထိ ရောကျတယျ။
ကနြျောတို့က သဘာဝ ရအေရငျးအမွဈ ပွုနျးတီးသှားတယျ။ တကယျလို့ ဒါတှမြေား တူးဖျေါပွီးတော့မြား လုပျမယျ ဆိုလို့ရှိရငျ ဧရာဝတီ မွဈကွီးသညျ ကနြျောတို့ သောကျသုံးရေ၊ စိုကျပြိုးရေ၊ မွနျမာပွညျရဲ့ ကုနျတှေ အထကျ ဗနျးမျောအထိ တငျလုိ့ရတဲ့ ကုနျပစ်စညျး တငျပို့ရေး အထိမြား စဉျးစားမယျ ဆိုရငျတော့ အားလုံးက တခကျြခုတျ အမြားကွီး ပွတျပါတယျ။”
စိုကျပြိုးရေး ပညာရှငျ ဒေါကျတာထှနျးဝငျးရဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ပဲ ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပှံနဲ့နညျးပညာ ကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။